Isakhelo esincinci seGlasi yokuSingathwa kweZitshixo zeZitshixo- iZhongshan City YALIS Hardware Products Co, Ltd.
Isakhelo seSlim Siphatho seNdlu yokuPhatha iZisombululo
Ngokuthandwa kwezitayile ezincinci, iingcango zesilayidi ezincinci zesilayidi ziya ngokuhlala kwindawo ephambili kwimarike yophuculo lwasekhaya ngenxa yokuqaqambela kwayo okuqaqambileyo kunye nokuqonda okuphezulu.
Nangona kunjalo, ucango lweglasi olutshixa emarikeni kunzima ukudibanisa namasango eglasi yesakhelo esincinci. Ngophando oluninzi lwentengiso, u-YALIS ufundile ukuba abathengi bezinto ezincinci zesakhelo seglasi bajongana neengxaki ezinje ngesakhelo sangaphakathi esingafanelekanga, iinketho ezimbalwa, kunye nezitayile ezingalinganiyo njalo njalo. Ngezi zizathu, i-YALIS idibanisa ukusebenza kunye nobugcisa beengcango zokuphatha iingcango zeglasi kunye neminyango yeglasi yesakhelo esincinci, ukugcina ukungafihli kunye nokuqonda okuphezulu.
UKUSETYENZISWA KWEZINTO ezininzi kunye neziglasi zeglasi zenziwe kwiprofayili ye-aluminium kwaye zilungiswa ngoomatshini be-CNC. Ayisiyiyo kuphela ukuchaneka kwezincedisi eziphakamileyo, kodwa zinokwenziwa ukuba zigqitywe ngokufanayo nesakhelo seengcango zeglasi zeslim, ukwenzela ukuba izibambo zomnyango weglasi kunye neminyango yeglasi ifezekiswe.
1. Ubume bokubamba obunelungelo elilodwa bunokulwa nokuvulwa kobundlobongela kunye nokuthintela izibambo ukuba zingajingi.
2. UKUSETYENZISWA KWEZINTO NGOKUPHELELEYO kuhambelana ne-latch lock yamagnetic, kunokunciphisa ingxolo xa iqhaga lomnyango livulwa livaliwe.
3. Ilungele iingcango ezinombala omnye kunye neengcango ezibengezelayo.
4. Ityala logwayimbo oluhlengahlengiswayo lunokunciphisa ubunzima bokufaka.
Ngokuthandwa kweengcango zeglasi zesakhelo esincinci, uninzi lweengcango zeglasi zenza ukuba iimveliso zazo zihambelane nezinto ezikhethwa ngabathengi, kodwa kwangaxeshanye baya kufumanisa ukuba iihardware zomnyango azinakwenza iimveliso zazo zikhuphisane ngakumbi kwaye zinenzuzo. Ke ngoko, i-YALIS iphuhlise UMKHUSELEKO wochungechunge lwengcango yeglasi yokutshixa isakhelo esincinci kwisango eline-glazed.
1. UMKHUSELEKI utshatise iqhaga lemagnethi elitshixwayo, lwenze ucango luvule ngakumbi.
2. Izinto eziphathekayo ziyi-profile ye-aluminium, enokwenziwa ekugqibeleni okufanayo kunye nefreyimu yomnyango weglasi.
3. I-rosette inokwenziwa ngokobungakanani besakhelo somnyango weglasi ukuhlangabezana neemfuno zabathengi.
4. Ilungele iingcango ezinombala omnye.
A: Iglasi yokusasaza + iYALIS Izibambo zoMnyango
I-90mm ye-Square Splint + YALIS Izibambo zoMnyango
1. Izinto eziphathekayo yi-alloy zinc.
2. Ilungele iingcango zeglasi ezinombala omnye kunye neengcango ezibengezelayo.
3. Umsebenzi wabucala kunye nomsebenzi wokungena unokukhetha.
B. B Glass Splint + YALIS Iingcango zoMnyango
1. Isipili segilasi sinemicwe yerabha eyakhelweyo ukuthintela iglasi enamabala.
2. Ilungele iingcango ezinombala omnye kunye neengcango ezibengezelayo.
3. Inokuthelekiswa nazo zonke izibambo zomnyango ze-YALIS.
Umsebenzi wabucala kunye nomsebenzi wokungena unokukhetha.
5. It ifanelana cwaka lock mortise lock.